स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गाउँँलेले गरे बिरालो बहिस्कार - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गाउँँलेले गरे बिरालो बहिस्कार
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गाउँँलेले गरे बिरालो बहिस्कार
हेल्थ आवाज बुधबार, २०७६ भदौ १८ गते, १४:४२ मा प्रकाशित
एजेन्सी– न्युजिल्यान्डको दक्षिणी तटको एउटा गाउँँले सम्पूर्ण घरेलु बिरालोलाई प्रतिबन्ध लगाउँने योजनामा छन । ओमावीका मानिसहरुले आफूहरूले अहिले पालिरहेको बिरालो मरेपछि नयाँ पाल्ने छैनन् । आखिर किन ? बर्षेनी हजारौ चराचुरुंगी तथा स्तनधारी प्राणीको मृत्युको मुख्य कारक बिरालोले स्थानीयको स्वास्थ्यमा पनि अशर गर्न थालेपछि गाउँलेहरुले अब बिरालो नै बहिस्कार गर्ने भएका हुन ।
बिरालोका कारण मानिसको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको उनीहरुले बताउदै आएका छन् । बिरालोले मारेर छोडेका चराचुरुंगीकै कारण सो गाँउमा ज्वरो, झाडावान्ता, रुघाखोकीलगायतका समस्या बारम्बार देखिएको बताइएको छ ।
स्मिथसोनियन माइग्रेटरी बर्ड सेन्टरका प्रमुख डा. पिटर माराले चराचुरुंगी तथा प्राणीको असामयिक मृत्युमा बिरालो मुख्य कारक भएको विषयलाई विभिन्न पुस्तक तथा जर्नलमा लेखेका छन् । बिरालोले गाउँमा स्वास्थ्य समस्या ल्याएको पनि उनी बताउछन । बिरालोले मानिसको स्वाथ्यमा श्वासप्रश्वासलगायतका समस्या निम्त्याएकोले विज्ञहरूले तत्कालै यो प्राणीलाई गाउँबाट हटाउन सुझाब दिएका छन् ।
तर, वर्षौंदेखि पालेको जन्तुसँग मानिसहरूको भावनात्मक सम्बन्ध बढेकाले त्यसलाई तत्काल घरबाट लखेट्न गाउलेले सकेनन् ।
अर्कोतर्फ गाउँका दर्जनौँ बिरालोलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा पनि अर्को समस्या खडा भयो । अन्ततः गाउँलेले अब नयाँ बिरालो नपाल्ने बताएका छन् । यसका लागि उनीहरूले आफूसँग अहिले भइरहेका बिरालोको संख्या स्थानीय कार्यालयमा रेकर्ड गराएका छन्, ताकि अगामी दिन अनुगमन अधिकारीलाई अनुगमन गर्न सहज होस् ।बिरालो र यसले स्वाथ्यमा पार्ने प्रभावबारे ओमावीमा लामो समयदेखि बहस चलेको छ ।